Amanyathelo ama-3 esiQhinga esiQinisekileyo seDijithali sabaPapashi abaqhuba ukuBandakanyeka kunye neRhafu | Martech Zone
Njengokuba abathengi behambile ngokuya besebenzisa iindaba ezikwi-Intanethi kwaye banokukhetha okuninzi ngakumbi, abashicileli abaprintayo babone ukuhla kwemali yabo. Kwaye kuninzi, kube nzima ukuziqhelanisa nesicwangciso sedijithali esisebenza ngokwenene. Iindonga zokuhlawula ziyeyona ntlekele, ukuqhuba ababhalisile kude nobuninzi bomxholo wasimahla. Ukubonisa iintengiso kunye nomxholo oxhasiweyo uncede, kodwa iinkqubo ezithengisiweyo ngokuthe ngqo ziyabasebenzi kwaye zibiza kakhulu, zizenza ukuba zingafikeleli ngokupheleleyo kumawaka abavakalisi abancinci.
Sebenzisa inethiwekhi yentengiso ukuzalisa ngokuzenzekelayo uluhlu lwempahla kube yimpumelelo ngandlela ithile, kodwa ezi zixhomekeke kakhulu kwiicookies ekujoliseni abaphulaphuli, zenza iindlela ezine ezinkulu. Okokuqala, ii-cookies azikaze zichaneke kakhulu. Zijonge ngqo kwizixhobo, ngenxa yoko azinakho ukwahlula phakathi kwabasebenzisi abaninzi kwizixhobo ekwabelwana ngazo (ithebhulethi esetyenziswa ngamalungu aliqela endlu, umzekelo), okuthetha ukuba idatha abayiqokelelayo ayinangqondo kwaye ayichanekanga. Iicookies azikwazi ukulandela abasebenzisi ukusuka kwesinye isixhobo ukuya kwesinye. Ukuba umsebenzisi utshintsha ukusuka kwilaptop ukuya kwiselfowuni, umzila wecookie ulahlekile.
Okwesibini, ii-cookies azikhethi. Kude kube kutshanje, ii-cookies zilandelele abasebenzisi ngokupheleleyo ngaphandle kwemvume yabo, kwaye amaxesha amaninzi ngaphandle kolwazi lwabo, bekhulisa iinkxalabo zabucala. Okwesithathu, iibhlokers zentengiso kunye nokukhangela ngasese kubeke i-kibosh kwi-cookie esekwe ekulandeleleni njengeengxelo zemithombo yeendaba malunga nokuba iinkampani zisebenzisa njani-okanye zisebenzisa gwenxa, njengoko kunokuba njalo-idatha yabaphulaphuli iye yonakalisa ukuthembana, yenza ukuba abasebenzisi bakrokre kwaye bangonwabi. Kwaye okokugqibela, ukuvalwa kwamakhukhi omntu wesithathu ngazo zonke iibrawuza eziphambili kuye kwabangela ukuba ii-cookies zintengiso zingenanto kwaye zingasebenzi.
Okwangoku, abapapashi bakwanobunzima bokusebenzisa iiwebhsayithi zokunxibelelana ukuqhuba ingeniso-okanye mhlawumbi ngokuchanekileyo, iinethiwekhi zentlalo ziye zasebenzisa ithuba labapapashi. Ayisiyo kuphela ukuba la maqonga abiwe kwinxalenye enkulu yenkcitho yentengiso, kodwa ikwatyhalele umxholo wabapapashi kwindaba yeendaba, ukuphanga abapapashi ithuba lokufika phambi kwabaphulaphuli babo.
Kwaye isiphelo sokugqibela: ukugcwala kwezentlalo yi-100% yokuhanjiswa kwezithuthi, oko kuthetha ukuba umsebenzisi ucofa kwindawo yomshicileli, umvakalisi akanakho ukufikelela kwidatha yomsebenzisi. Ngenxa yokuba abanakho ukubazi abo batyeleli abathumelayo, akunakwenzeka ukuba bafunde umdla wabo kwaye basebenzise olo lwazi ukukhonza ngaphezulu kwezinto abazithandayo ukugcina bezibandakanya kwaye bebuya.
Ke, yintoni ekufuneka yenziwe ngumshicileli? Ukulungelelanisa le nyaniso intsha, abapapashi kufuneka bathathe ulawulo ngakumbi kubudlelwane babaphulaphuli kunye nokwakha unxibelelwano olomeleleyo lomntu omnye endaweni yokuxhomekeka kubantu besithathu. Nantsi indlela yokuqalisa ngamanyathelo amathathu esicwangciso sedijithali esibeka abapapashi kwindawo yokuqhuba kunye nokuqhuba ingeniso entsha.
Inyathelo 1: Bakho abaphulaphuli bakho
Ngabaphulaphuli bakho. Endaweni yokuxhomekeka kumaqela esithathu afana neicookies kunye namajelo entlalontle, endaweni yoko, jolisa ekwakheni isiseko sababhalisi bakho ngokubhalisa kwiileta zeendaba zakho ze-imeyile. Kuba abantu kunqabile ukuba babelane ngedilesi ye-imeyile, kwaye iyafana kuso sonke isixhobo, i-imeyile sisichongi esichaneke ngakumbi nesisebenza ngakumbi kunekuki. Kwaye ngokungafaniyo neziteshi zentlalo, unokunxibelelana nabasebenzisi ngokuthe ngqo kwi-imeyile, ukusika umntu ophakathi.
Ngokuzibandakanya ngokuthe ngqo, ungaqala ukwakha umfanekiso opheleleyo ngakumbi wokuba bafuna ntoni abasebenzisi ngokulandela indlela abaziphethe ngayo kunye nokufunda izinto abanomdla kuzo nakwizixhobo nakwimijelo. Kwaye, ngenxa yokuba i-imeyile ingene ngokupheleleyo, abasebenzisi banike ngokuzenzekelayo imvume yokuba ufunde indlela abaziphethe ngayo, kungoko kukho inqanaba eliphezulu lokuthembela.
Inyathelo lesi-2: Ukunyusa amaZiko aBanini ngaphezulu kwamaChannel eQela leQela lesiThathu
Sebenzisa amajelo athe ngqo njenge-imeyile kunye nokutyhala izaziso ukubandakanya ababhalisile kangangoko kunokwenzeka endaweni yentlalo kunye nokukhangela. Kwakhona, ngentlalo kunye nokhangelo, ubeka umntu wesithathu kulawulo lobudlelwane bakho nabaphulaphuli. Abagcini-masango abalawuli kuphela ingeniso yentengiso kodwa kunye nedatha yomsebenzisi, eyenza ukuba kungabi lula ukuba ufunde malunga nezinto abazithandayo kunye nezinto abanomdla kuzo. Ukutshintsha ujoliso lwakho kujonge kumajelo olawulo owenzayo kuthetha ukuba ulawula idatha yomsebenzisi ngokunjalo.
Inyathelo lesi-3: Thumela uMxholo ofanelekileyo, oCwangcisiweyo
Ngoku ukuba uyazi ngakumbi malunga nokufunwa ngumbhalisi ngamnye, unokunyusa ezo majelo ukuthumela umxholo owenzelwe umntu ngamnye. Endaweni ye-batch-and-blast, ubungakanani obulinganayo-yonke i-imeyile okanye umyalezo oya kubo bonke ababhalisile, ukuthumela umxholo owenziwe ngokwezifiso kungqineke kusebenza ngakumbi kubabhalisi kunye nokuhlakulela ubudlelwane obuhlala buhleli.
kuba Imidlalo yeGoGy, iqonga lokudlala elikwi-Intanethi, ukuthumela izaziso zokutyhala ngokwesiko kubeyinxalenye enkulu yesicwangciso sabo sokuzibandakanya ngempumelelo.
Ukukwazi ukuthumela umyalezo olungileyo kunye nesona saziso sichaphazelekayo kumsebenzisi ngamnye kubaluleke kakhulu. Bajonge into eyenzelwe wena, kwaye ukuthandwa komdlalo kubaluleke kakhulu. Bafuna ukudlala into edlalwa ngumntu wonke kwaye loo nto iyodwa incede ukuqhuba ngokucofa amaxabiso kakhulu.
UTal Hen, umnini weGoGy
Esi sicwangciso somxholo esenziwe ngokwezifiso sele sisetyenzisiwe ngabapapashi abanjengoGoGy, iNdibano, iNethiwekhi yeWebhu yeSalem, iDysplay kunye neAlmanac yeFama uku:
hambisa ngaphezulu kwezigidi ezi-2 zezaziso ngenyanga
Qhuba a I-25% yokuphakamisa ukugcwala
Qhuba a Ukunyuka kwama-40% kwiphepha lokujonga iphepha
Qhuba a I-35% yokunyuswa kwemali engenayo.
Ngelixa iqhinga lingqineke lisebenza, usenokuzibuza:
Ngubani ixesha kunye nezixhobo zokuthumela ii-imeyile ezizezakho kunye nokutyhala izaziso kumakhulu amawaka okanye kwizigidi zababhalisile?
Yilapho i-automation ingena khona Jeeng ngePowerInbox iqonga libonelela ngesisombululo esilula, esizenzekelayo sokuthumela ii-push zakho kunye nezilumkiso ze-imeyile kubabhalisi ngomzamo wezandla. Eyakhelwe ngokukodwa abapapashi, itekhnoloji yokufunda kaJeeng yokufunda umatshini ifunda ukhetho lomsebenzisi kunye nokuziphatha kwi-Intanethi ukulungiselela izaziso ezifanelekileyo, ezilungiselelwe kunye nezijolise kuzo eziqhuba ukubandakanyeka komsebenzisi.
Ukongeza ekunikezeleni isisombululo esizenzekelayo, kubandakanya ukubanakho ukucwangcisa izaziso zokukhulisa ukubandakanyeka, iJeeng ikwavumela abapapashi ukuba benze imali ngokutyhala kwabo kunye nokuthumela i-imeyile ukongeza umsinga wengeniso. Kwaye, ngemodeli yokwabelana ngengeniso kaJeeng, abapapashi banokongeza isisombululo esinamandla sokuzibandakanya ngeendleko ezingaphambili.
Ngokwakha isicwangciso esiliqili sokuhambisa umxholo sisebenzisa amajelo avumela abapapashi ukuba babenabo ubudlelwane babaphulaphuli, abapapashi banokuqhuba ngakumbi ukugcwala-kunye nomgangatho ophezulu wezithuthi-babuyela kumaphepha abo, ke ngoko baqhuba ingeniso ephezulu. Ukufunda okuthandwa ngabaphulaphuli bakho kubaluleke kakhulu kule nkqubo kwaye ngekhe uyenze loo nto xa uthembele kwiqela lesithathu, amajelo okudlulisa. Ukuthatha uxanduva kolo lwalamano ngamajelo anayo yeyona ndlela ilungileyo yokwakha iqhinga ledijithali elikhulisa abaphulaphuli bakho kunye nengeniso.
Ukufunda ukuba iJeeng ezenzekelayo ngokuzenzekelayo ngePowerInbox inokunceda njani:
Bhalisela iDemo namhlanje
tags: iibhloko zentengisoukuhanjiswa komxholocookiesjeengyokufunda umatshiniizaziso mobileukhethe kungumniniabeendabaibhokisi lebhokisiizaziso zokutyhalaiindlela zokudlulisa
Izibalo zeCRM ze2020: Ukusetyenziswa, iziBonelelo kunye neMiceli mngeni kumaQonga oLawulo lwaBathengi